Baatiwwan shanan darbaniitti daldalaa alaarraa galiin doolaarri Ameerikaa biiliyoonni 1.33 argamuu ibsame – Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Baatiwwan shanan darbaniitti daldalaa alaarraa galiin doolaarri Ameerikaa biiliyoonni 1.33 argamuu ibsame
On Dec 23, 2020 48
Finfinnee, Muddee 14, 2013 (FBC)- Baatiwwan shanan darbaniitti daldalaa alaarraa galiin doolaarri Ameerikaa biiliyoonni 1.33 argamuu Ministeerri Daldalaa fi Indaastirii ibseera.
Ministirri Ministeera Daldalaa fi Indaastirii obbo Malaakuu Allabal ibsa miidiyaaleef laataniin, baatiwwan shanan darbaniitti daldalaa alaarraa galiin doolaarri Ameerikaa biiliyoonni 1.33 argameera jedhan.
Baatiwwan shanan keessaatti daldala alaarraa doolaara Ameerikaa biiliyoona 1.41 argachuuf karoorfame ture jedhan.
Bara baajatichaatti raawwii baatiwwan shananin %94 milkeessuun danda’ameera jedhaniiru.
Raawwichi kan bara darbee yeroo walfakkataan wal bira qabamee yoo ilaallamuu caalmaa doolaara miiliyoona dhibba 2 fi miiliyoona 24.5 ykn %20 akka qabus obbo Malakuun ibsaniiru.
Bara baajata 2013 baatiwwan shanan jalqabaatti damee albuudaarra karooraa ol % 271 yoo milkaa’u, damee indaastirii oomishaarra % 93 akkasumas damee qonnaarra %76 milkeessuu danda’amuu ragaan Ministeericharra argamee ni muul’dhisa.